Taariikhda Ayaa Cadaysay, Waxa Uu Koobka Horyaalka Spain Ee La Liga Uu Ku Jiraa Gacanta Kooxda Barcelona-Akhriso Xogta. - GOOL24.NET
Taariikhda Ayaa Cadaysay, Waxa Uu Koobka Horyaalka Spain Ee La Liga Uu Ku Jiraa Gacanta Kooxda Barcelona-Akhriso Xogta.
Kooxda Barcelona ayaa gali doonta todoba maalmood oo kulam cadaadis badan leh laakiin kooxda Valverde ayaa loo xaqiijiyay in koobka horyaalka Spain ee La Liga uu gacmahooda ku jiro haddii ayna iyagu iska tuurin kadib markii ay gaadheen heer looga soo bartay in kooxda gaadhaa ay koobka ku guulaysanayso.
Barcelona ayaa hogaanka La Liga ku haysa 54 dhibcood kadib markii 24 kulan la soo ciyaaray waxayna hadda 7 dhibcood ka saraysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Atletico Madrid halka ay Barca awooday in ay 9 dhibcood ka sare martay kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Real Madrid.
Barcelona ayaa maalmaha soo socda waxay cadaadis adag ku mari doontaa kulamada labada kulan ee Lyon ee Champions League, labada kulan ee Real Madrid iyo waliba kulanka Sevilla, waana maalmo mashquul iyo dhibaato badan oo caawa ka bilaabi doona marka ay Lyon ku wajahaan Champions league.
Laakiin wargayska Marca ayaa soo bandhigay in koobka horyaalka La Liga uu gacamaha Barcelona ku jiro haddii ay tahay in la rumaysto taariikhda horyaalka Spain maadaama oo ayna jirin koox hogaanka La Liga 7 dhibcood ku qabtay kadib kulamada 24 aad oo aan koobka ku guulaysan.
Koox kasta oo 7 dhibcood ku qabtay hogaaminta horyaalka Spain ee La Liga marka la ciyaaray kulamada 24 aad ayaa soo noqotay Championska Spain waana sababta koobka horyaalka La Liga loogu hibinayo in Barcelona ay xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah ku guulaysan doonto.
“Taariikhdu waxay soo jeedinaysaa in koobku ku dabran yahay Camap Nou maadaama oo ayna waligeed kooxini ka takhalusin 7 dhibcood oo laga sareeyay kadib wareega 24 aad si ay Champions u noqoto” ayuu lagu sheegay warbixin lagu daabacay Marca.
Barcelona ayaa mari doonta imtixaan aad u adag marka ay booqan doonto kooxaha Sevilla iyo Real Madrid waana laba kulan oo loo arko in ay saamaynta ugu wayn yeelan karaan, haddii ay Barcelona kulamadan ka hesho natiijo fiican waxay sii cadayn doonaan in koobka aan laga dhaqaajin karin.
Barcelona ayaa hogaanka horyaalka La Liga soo haysay tan laga soo bilaabo kulamadii 10 aad ee horyaalka La Liga sida aad jaantuska hoose ka arki karto waxaana kaalinta labaad ku soo jirtay Atletico Madrid marka laga reebo kulamadii 23 aad oo ay Real Madrid todobaad kaalinta labaad ku jirtay.
Todobaadyadii la soo dhaafay Real Madrid ayaa soo yaraysay farqiga ay u jirtay Barcelona kadib markii ay Atletico Madrid guul ka gaadheen, laakiin guuldaradii lama filaanka ahayd ee Madrid ka soo gaadhay Girona ayaa xalaada gabi ahaanba badashay halka Barca ay ku raaxaysatay labadii guuldaro ee kooxaha reer Madrid.